बिरामीको विश्वास जित्दै सरकारी अस्पताल – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७६ कार्तिक ३ गते ६:२२ मा प्रकाशित
डोटी । जिल्ला अस्पताल डोटीले पछिल्लो समय सेवाग्राहीको विश्वास जित्दै आएको छ । डोटी जिल्लाका मात्र नभएर जिल्लाभन्दा बाहिरका बिरामी पनि उपचारका लागि उक्त अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।
अस्पतालले प्रसूति शल्यक्रियामा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा सेवाग्राहीको विश्वास जितेको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ । छिमेकी जिल्ला अछाम, डडेल्धुरा र बाजुराबाट समेत शल्यक्रियाका लागि बिरामी आउने गरेको जिल्ला अस्पताल डोटीका डाक्टर गिरिष अवस्थीले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय हामीसँग उपकरण, चिकित्सक र औषधि उपलब्ध भएकाले हामीले सेवाग्राही बिरामीको रोग निको पार्न सफल भएका छाँै, त्यसैले पनि बिरामीको संख्या थपिँदै गएको हो ।’
डडेलधुराको उपक्षेत्रीय अस्पातलमा सम्भव नभएपछि अमरगढी नगरपालिका–८ की हमेन्ती ओझा केही समय पहिले जिल्ला अस्पताल डोटीमा आएकी थिइन् । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाको रिफरल हस्पिटलका रूपमा रहेको उपक्षेत्रीय अस्पातलमा नसकिएको प्रसूति डोटी अस्पतालमा सफल भएपछि उनी हालै घर फर्किएकी छन् । चिकित्सक नभएका कारण उपचार सम्भव नभएको भन्दै उनलाई डोटी सिफारिस गरिएको थियो । उपचार सफल भएपछि अहिले जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको भीड लाग्ने गरेको डा. अवस्थीले दाबी गरे ।
उनले भने, ‘डडेलधुराले डोटी पठायो, उपचार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्तामा थियौँ, तर उपचार सफल भएको छ ।’ ओझाको जिल्ला अस्पताल डोटीमा शल्यक्रियाविना नै प्रसूतिको सफल उपचार भएको जिल्ला अस्पताल डोटीले जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल डोटीमा एक वर्षमा ६८ को प्रसूति शल्यक्रिया सफल गरिएको अस्पतालका प्रमुख तथा डा. भूषण मिश्रले जानकारी दिए । सहज तरिकाले बच्चा पाउन नसकेका महिलाको शल्यक्रियामार्फत बच्चा निकालिएको उनले बताए । ३० महिलाले पहिलो बच्चा पाउँदा पनि शल्यक्रिया गरेको र उनीहरूको पुनः दोस्रोपटक शल्यक्रिया गरिएको जिल्ला अस्पतालका डा. गिरिष अवस्थीले जानकारी दिए ।